Taorian’ny fahamaizana: eny amin’ny Olep Ambatobe ny biraon’ny ONE | NewsMada
Taorian’ny fahamaizana: eny amin’ny Olep Ambatobe ny biraon’ny ONE
May ny 15 jolay 2020 ny biraon’ny Ofisim-pirenena misahana ny fizahantany (ONE) tetsy Antaninarenina. Taorian’izany, nanapa-kevitra ny mpiahy azy, ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy (Medd) fa nafindra eny amin’ny trano misy ny foiben’ny sampandraharaha Olep Ambatobe, ny birao vonjimaika. Omaly 13 aogositra ny fotoana nampahafantaran’ny minisitra, Raharinirina Vahinala Baomiavotse izany.
Tanteraka ity fandaminana ity, vokatry ny firaisankina nataon’ny mpiasan’ny ONE sy ny mpiara-miombon’antoka amin’ny minisitera, toy ny Fiaraha-miasa alemà GIZ, ny orinasa tsy miankina SMTP, namatsy fitaovana sy kojakoja samihafa. Nanao tsipaipaika rahateo ny mpiasan’ny ONE, sady nampian’ny minisitera Medd, nanatsarana ny fotodrafitrasa ilaina amin’ity birao vonjimaika ity.
Nankahery ny mpiasa Rtoa minisitra Raharinirina Vahinala, ary nanome toky fa tsy maintsy harenina ny trano eny Antaninarenina. Notsipihiny fa tsy birao ihany ny eny fa sady vakoka ihany koa. Hojerena ihany koa ny lafiny maha olona hitsinjovana ireo mpiasa, araka ny fangatahany tamin’ny minisitra.
Mikasika ny nahamay ny birao teny Antaninarenina, nilaza Rtoa minisitra fa mitohy ny fanadihadiana ataon’ny Sampana heloka bevava ao amin’ny polisim-pirenena ary samy miandry ny valin’izany.